Chakavanzika - Richardmille.to
Yakagadziridzwa: July 08, 2020
Iyi YeSecurity Policy inotsanangudza Isu marongero nemafambisirwo pane izvo zvinunganidzwa, kushandisa uye kuburitsa ruzivo Rako paunoshandisa Shumiro uye Inokuudza Iwe nezve ako Kakavanzika kodzero uye kuti mutemo unokudzivirira sei.
Isu tinoshandisa Yako Yemunhu data kupa uye nekuvandudza Sevhisi. Nekushandisa iyo Sevhisi, Unobvuma kuunganidzwa uye kushandiswa kweruzivo zvinoenderana nePamutemo Policy. Iyi Yakavanzika Policy yakagadzirwa nerubatsiro rweYakavanzika Policy jenareta.
Kududzira uye Tsanangudzo
Mashoko ekuti iyo yekutanga tsamba yakapihwa mari ane zvirevo zvinotsanangurwa pasi pemamiriro anotevera. Dudziro dzinotevera dzinozova nerevo imwechete zvisinei nekuti dzinoratidzika mune imwe kana mune yakawanda.
Nekuda kweiyo Chengetedzo yeChakavanzika:
iwe zvinoreva munhu ari kuwana kana kushandisa Service, kana kambani, kana rimwe sangano repamutemo pachinzvimbo chake munhu iyeye ari kuwana kana kushandisa Service, sekushandira.
kambani (inonzi "Kambani", "Isu", "Isu" kana "Yedu" muchibvumirano ichi) zvinoreva richard mille.
Affiliate zvinoreva chinzvimbo chinodzora, chinodzorwa kana chiri pasi pechimwechete bato nepati, uko "kutonga" kunoreva kuve muridzi we50% kana anopfuura emasheya, equity mubereko kana zvimwe kuchengetedzeka zvine mvumo yekuvhotera kusarudzwa kwevatungamiriri kana imwe maneja manejimendi.
Account zvinoreva nhoroondo yakasarudzika yakagadzirirwa kuti iwe uwane Sevhisi yedu kana zvikamu zveSevhisi yedu.
Website inoreva richard mille, inowanikwa kubva https://www.richardmille.to/
sevhisi zvinoreva iyo Webhusaiti.
nyika inoreva: Massachusetts, United States
Service Provider zvinoreva chero munhu wechisikigo kana wepamutemo munhu anogadzira dhata akamiririra Kambani. Zvinoreva makambani ebato rechitatu kana vanhu vanoshandirwa neiyo Kambani kuti vafambise iyo Basa, kupa Service panzvimbo yeiyo Kambani, kuita masevhisi ane hukama neBasa kana kubatsira iyo Kambani pakuongorora mashandisiro anoita Service.
Yetatu-bato Social Media Service inoreva chero webhusaiti kana chero webhusaiti yekushamwaridzana nepo iyo Mushandisi anogona kupinda mukati kana kugadzira account yekushandisa Service.
Personal Data Ruzivo chero rupi zvarwo rwakanangana neyakaonekwa kana inozivikanwa.
Cookies mafaera madiki akaiswa paKomputa yako, nharembozha kana chero chinhu chero chinhu newebsite, ine ruzivo rweNhoroondo yako yekubhurawuza pawebhusaiti iyi pakati pezvakawanda zvinoshandiswa.
mudziyo zvinoreva chero chishandiso chinogona kuwana iyo Sevhisi senge komputa, nharembozha kana piritsi yedhijitari.
Use Data inoreva data yakaunganidzwa otomatiki, ingave yakagadzirwa nekushandiswa kweSevhisi kana kubva kuSource Service itself (semuenzaniso, nguva yekushanya kwemapeji).
Kuunganidza uye Kushandisa Yako Dhata
Paunenge uchishandisa yedu Service, Tinogona kukumbira Iwe kuti utipe isu neruzivo ruzivo rwunogona kuzivikanwa rwunogona kushandiswa kubata kana kuziva Iwe. Ruzivo runogona kuzivikanwa ruzivo rungasanganisira, asi harungogumiriwe kune:
Nzvimbo, State, Province, ZIP / Postal code, City
Yekushandisa data inounganidzwa otomatiki kana uchishandisa Service.
Kushandisa Dhata kunogona kusanganisira ruzivo senge Chombo Chako Internet Protocol kero (semuenzaniso IP kero), browser mhando, browser vhezheni, mapeji eSevhisi yaunoshanyira, nguva uye zuva rekushanya Kwako, nguva yakashandiswa pamapeji iwayo, yakasarudzika mudziyo zvitupa uye imwe data rekuongorora.
Paunosvika paSevhisi neraishandisa nharembozha, Tinogona kuunganidza mamwe ruzivo zvoga, kusanganisira, asi zvisingabvumirwe, mhando yefoni nhare yaunoshandisa, Nharembozha yako yakasarudzika ID, iyo IP kero yefoni yako yekushandisa, yako mbozhanhare. inoshanda system, iyo mhando yenharembozha yeInternet browser Iwe yaunoshandisa, yakasarudzika yedhibhaisiisi uye imwe yekuongorora data.
Tinogona zvakare kuunganidza ruzivo rwunotumirwa neBhurawuza yako pese paunoshanyira Service yedu kana paunosvika paSevhisi napo kana kuburikidza nefoni nhare.
Kuchengeta Technologies uye Cookies
Isu tinoshandisa ma Cookies uye akafanana tekinoroji ekuteedzera zviitiko paSevhisi yedu uye chengeta imwe ruzivo. Kutsvaga matekinoroji anoshandiswa ndebeacons, ma tag, uye magwaro ekuti utore uye utevedzere ruzivo uye nekuvandudza nekuongorora Basa Redu.
Unogona kuraira Bhurawuza rako kuti arambe ma Cookies ese kana kuratidza kana Cookie iri kutumirwa. Nekudaro, kana ukasagamuchira ma Cookies, Iwe haugone kushandisa zvimwe zvikamu zveSevhisi yedu.
Cookies anogona kuva "Anoramba" kana "Session" Cookies. Persistent Cookies dzinosara pakombuta yako kana nharembozha paunoenda kunze kwenyika, nepo Session Cookies ichidzimwa nekukurumidza paunovhara web browser yako. Dzidza zvakawanda nezve makuki: Zvese Nezve Cookies.
Isu tinoshandisa ese maviri musangano uye tinoshingirira kuki nekuda kwezvakatarwa pazasi:
Anodiwa / Anokosha CookiesType: Session CookiesInotungamirwa na: UsPurpose: Aya maKuki akakosha kukupa iwe masevhisi anowanikwa kuburikidza neWebhusaiti uye kukugonesa Iwe kushandisa zvimwe zvemaitiro ayo. Ivo vanobatsira kusimbisa vashandisi uye kudzivirira kushandiswa kwekunyepa kwea user account. Pasina maKuki aya, masevhisi awakumbira haakwanise kupihwa, uye Isu tinongoshandisa maKuki aya kukupa iwo masevhisi.
Cookies Policy / Cherechedzo Kugamuchirwa MakukiRudzi: Kuramba AchibikaMakeki Akaburitswa ne: UsPurpose: Aya ma Cookies anoratidza kana vashandisi vagamuchira kushandiswa kwekuki pane Webhusaiti.
Kushanda MazanoType: Anopfuurira CookiesAdministered na: UsPurpose: Aya ma Cookies anotibvumira kuyeuka sarudzo dzaunogadzira kana Iwe uchishandisa Iyo Webhusaiti, sekurangarira ako login info kana mutauro waunofarira. Chinangwa chei maKuki ndechekukupa iwe ruzivo rwehukama uye kudzivirira kuti iwe ugozoisa zvekare zvaunofarira pese paunoshandisa iyo Webhusaiti.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve makuki atinoshandisa uye nesarudzo dzako maererano nemakuki, ndapota shanyira maKuki Policy kana chikamu cheKuki cheMutemo Wedu Wekuvanzika.
Kushandisa Kwako Dhata
Iyo Kambani inogona kushandisa Yega data nezvezvinotevera zvinangwa:
Kupa uye kuchengeta Sangano redu, kusanganisira kutarisa kushandiswa kweSevhisi yedu.
Kugadzirisa Akaunti Yako: kubata Yako kunyoreswa sewe mushandisi weSevhisi. Iyo Yako Data yaunopa iwe inokupa Iwe kuti uende kune dzakasiyana functionalities yeSevhisi iyo inowanikwa Iwe semushandisi akanyoreswa.
Zvekuita kwechibvumirano: kuvandudza, kutevedzera uye kutora chibvumirano chekutenga zvigadzirwa, zvinhu kana masevhisi Iwe Wakatenga kana chero imwe chibvumirano nathi Isu kuburikidza neSevhisi.
Kuti tibate Iwe: Kukutaurirana newe neemail, kufona, SMS, kana dzimwe nzira dzakaenzana dzekutaurirana kwemagetsi, senge mbozhanhare yekushambadzira notices zvine chekuita nekuvandudzwa kana kutaurirana kunodzidzisa zvine chekuita neanoshanda, zvigadzirwa kana masevhisi emakondirakiti, kusanganisira izvo zvekuchengetedza, pazvinenge zvichidikanwa kana zvine musoro pakuitwa kwavo.
Kukupa iwe nezvenhau, kupa kwakakosha uye neruzivo ruzhinji nezvezvimwe zvinhu, masevhisi uye zviitiko zvatinopa izvo zvakafanana neizvo iwe watove watatenga kana kubvunza nezvazvo kunze kwekunge Wasarudza kusagamuchira ruzivo rwakadai.
Kugadzirisa Zvikumbiro zvako: Kuti upinde uye tungamira zvikumbiro zvako kwatiri.
Tinogona kugovera ruzivo rwako pachako mumamiriro ezvinhu anotevera:
Nevashandisi Vebasa: Tinogona kugovera Ruzivo rwako pachako neVanopa Rubatsiro kuti vatarise uye kuongorora kushandiswa kweSevhisi yedu, kubata Iwe.
Kune Bhizinesi rekuchinjiswa: Tinogona kugovera kana kuendesa Ruzivo rwako pachedu zvine chekuita ne, kana panguva yekutaurirana kwe, kubatana kupi, kutengeswa kwemidziyo yeKambani, mari, kana kuwana zvese kana chikamu chebhizinesi redu kune imwe kambani.
Nehukama: Tinogona kugovera Ruzivo Rako neVakabatana navo, mune iyo mamiriro ezvinhu isu tichafanira kuda vanobatana kuti vakudze ichi cheChakavanzika Policy. Vakabatana vanosanganisira kambani yevabereki vedu uye chero chero rubatsiro, vanobatana nevamwe kana mamwe makambani atinotonga kana ari pasi pehukama nesu.
Nemabhizinesi ebhizinesi: Tinogona kugovera Ruzivo Rako neVano bhizinesi vatinoshanda navo kuti vakupe Iwe zvimwe zvigadzirwa, masevhisi kana kukwidziridzwa.
Uine vamwe vashandisi: paunogovana ruzivo nezvako kana kuita neimwe nzira munzvimbo dzeveruzhinji nevamwe vashandisi, ruzivo rwakadai rwunogona kutariswa nevose vashandisi uye runogona kuparadzirwa pachena. Kana iwe Ukabatana nevamwe vashandisi kana kunyoresa kuburikidza neTatu-Party Social Media Service, Vako vaunosangana navo paChitatu-Party Social Media Service vanogona kuona zita Rako, chimiro, mifananidzo uye tsananguro yeBasa rako. Saizvozvo, vamwe vashandisi vachakwanisa kuona tsananguro dzebasa rako, kutaurirana newe uye kuona chimiro chako.
Kuchengetwa kweYako Dhata Dhata
Iyo Kambani ino chengetedza yako Yega Ruzivo chete kwenguva yakareba sezvazvinodiwa kune zvinangwa zvakarongwa mune ino Yekudzivirira Policy. Tichachengeta uye tishandise Yako Yega Data kusvika padanho rinodiwa kuti vatevedze nemutemo zvisungo zvedu (semuenzaniso, kana isu tichidikanwa kuti tivhengese data rako kuti riite maererano nemitemo inoshanda), gadzirisa kupokana, uye tishandise zvibvumirano zvedu zvepamutemo nemitemo.
Iyo Kambani zvakare icha chengetedza Usage Data kune zvemukati zvinangwa zvekuongorora. Yekushandisa Dhata inowanzochengetwa kwenguva pfupi yenguva, kunze kwekunge iyi data inoshandiswa kusimbisa chengetedzo kana kuvandudza mashandiro eSevhisi Yedu, kana Isu tinosungirwa pamutemo kuchengetedza iyi data kwenguva yakareba.
Kuendesa kweYako Dhata Dhata
Ruzivo rwako, kusanganisira Ruzivo rweMunhu, rwunogadziriswa kumahofisi eKambani ekushandira uye mune chero nzvimbo dzinowanikwa mapato anopinda mukugadziriswa. Zvinoreva kuti ruzivo urwu runogona kuendeswa ku - uye kuchengetedzwa pa - makomputa ari kunze kwenzvimbo Yako, dunhu, nyika kana humwe hutongi hwehurumende uko iyo mitemo yekuchengetedza data inogona kusiyanisa neiyo inobva kuutongi Hwako.
Kubvumidza kwako kuChichengetedzo Iyi inoteverwa Nekutumira kwako ruzivo rwakadai kunomirira Chibvumirano chako kune icho chinotamiswa.
Iyo Kambani inotora matanho ese anodikanwa kuti ive nechokwadi chekuti Yako dhata inobatwa zvakachengetedzeka uye zvinoenderana neichi Chakavanzika Chirongwa uye hapana kuendeswa kweYako Chako Dhata kunoitika kusangano kana nyika kunze kwekunge paine zvakakwana zvinzvimbo zviripo zvinosanganisira kuchengetedzwa Yako data uye imwe ruzivo rwevanhu.
Kuzivisa kweYako Dhata Dhata
Kana iyo Kambani inobatanidzwa mukubatanidzwa, kutora kana kutengesa zvinhu, Yako Chako Data inogona kutamiswa. Isu tinopa chiziviso isati Yako Yega Data yashambidzwa uye inova pasi peimwe Rutivi rwePamutemo.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, Kambani inogona kuve inofanirwa kuzivisa Chako Chivande data kana ichidikanwa kuita kudaro nemutemo kana kupindura zvikumbiro zvine simba nezviremera zveruzhinji (semuenzaniso dare kana gurukota rehurumende).
Zvimwe zvinodiwa pamutemo
Iyo Kambani inogona kuburitsa Yako Yega Dhaiti mukutenda kwakanaka kutenda kuti kuita kwakadai kunokosha kune:
Bvumirana nechisungo chepamutemo
Chengetedza uye udzivirire kodzero kana zvinhu zveKambani
Dzivirira kana kuferefeta zvisingaiti zvine chekuita neBasa
Chengetedza kuchengetedzeka kwega kweVashandisi veSevhisi kana yeruzhinji
Dzivirira kubva pakune mhosva kwepamutemo
Kuchengetedza Yega Yako data
Kuchengetedza kweYako Chirevo data kwakakosha kwatiri, asi yeuka kuti hapana nzira yekutapurira pamusoro peInternet, kana nzira yekuchengetedza yemagetsi iri 100% yakachengeteka. Kunyange Tichiedza kushandisa nzira dzinozivikanwa kutengesa kuchengetedza Yako Dhata, Hatigone kuvimbisa kuchengeteka kwayo chaiko.
Yako California Yakavanzika Kodzero (California ya Shine iyo Chiedza mutemo)
Pasi peCalifornia Civil Code Chikamu 1798 (California Shine iyo Chiedza mutemo), vagari veCalifornia vane hukama hwebhizinesi hwakagadzwa nesu vanogona kukumbira ruzivo kamwe chete pagore nezvekugovana yavo Dhata Yemunhu nevechitatu mapato evatatu.
Kana iwe uchida kukumbira rumwe ruzivo pasi peCalifornia Shine iyo Chiedza mutemo, uye kana iwe uri mugari weCalifornia, Unogona kutaura nesu uchishandisa ruzivo rwekufambidzana rwapihwa pazasi
California Yakavanzika Kodzero dzeVashoma Vashandisi (California Bhizinesi nePurofesa Code Chikamu 22581)
California Bhizinesi nePurofesa Code chikamu 22581 chinobvumidza vagari veCalifornia vari pasi pemakore gumi nemasere vanove vanyoresa vashandisi vepamhepo masaiti, masevhisi kana kunyorera kukumbira uye kuwana kubviswa kwezviri mukati kana ruzivo rwavakatumira pachena.
Kukumbira kubviswa kwe data rakadai, uye kana iwe uri mugari weCalifornia, Unogona kutibata Nesu uchishandisa ruzivo rwekutarisana rwunopihwa pazasi, uye unosanganisira email kero yakabatana neAka account yako.
Ziva kuti Chikumbiro chako hachivimbise kubviswa kwakazara kana kwakazara kwemukati kana ruzivo rwakatumirwa online uye kuti mutemo haungatenderi kana kuda kubviswa mune mamwe mamiriro.
Zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti
Yedu Sevhisi inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti ayo asiri kuitwa nesu. Kana Iwe ukabaya pane yechitatu bato batanidzo, Iwe uchaendeswa kune iyo yechitatu webhusaiti saiti. Isu tinokukurudzira zvikuru kuti utarise Zvemukati Zvayo nzvimbo yega yega yaunoshanyira
Tinogona kugadzirisa tsika yedu yekuchengetedza nguva nenguva. Isu tinokuzivisa iwe nezve chero shanduko nekutumira iyo nyowani Yavanzika Policy pane ino peji.
Tichakuzivisa iwe kuburikidza neemail uye / kana chiziviso chakakurumbira paSevhisi Yedu, shanduko isati yatanga kushanda uye kugadzirisa iyo "Yekupedzisira kuvandudzwa" zuva riri pamusoro peiyi Chakavanzika Policy.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve ino nezve Yakavanzika Policy, Unogona kutibata nesu:
Ne email: [email inodzivirirwa]